बाबु र हजुरबुबाबाट बालात्कृत, १३ बर्षकी छोरीसँग आफ्नै बाबुको गर्भ: हाम्रो समाज कहाँ जाँदैछ ?
म सानी छोरी बुबा हजुरबुबासँग नै सुरक्षित छैन !
काठमाडौ । हरेक सन्तानले आफ्ना बुबाको काखमा बस्दा सुरक्षित महसुस गर्छन् ।
त्यसैले त कसैले गा’ली गर्दा पनि बच्चाहरु भन्ने गर्छन् पख ‘बाबालाई भन्दिन्छु ।’
जब तिनै सन्तान आफ्नै बाबुबाट असुरक्षित बन्छन्, त्यसबेला कसले सुरक्षा दिने ?
कसको भरोसा गर्ने ? नेपालमा पछिल्ला घटनाले सोच्दा मात्र भक्कानीने बनाउँछ ।
हा’डना’ताबाट पी’डित सन्तानहरु खुलेर अगाडि आउन सक्दैनन् । जो आउँछन्, तिनीहरुलाई न्याय पाउन सजिलो छैन ।
तर, दबिएर बस्नेहरुले भन्दा खुलेर अगाडि आउनेहरुले नै न्याय पाउने गरेका छन् । अलिक सहज जीवन जिउन सकेका छन् । यसैले खुलेर अगाडी आउँनुहोस् ।
प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा १६९ जना छोरीहरु आ’फ्नै बा’बुको दु’ष्क’र्मको शि’का’र भ’एका छ’न् ।
३५ जनामाथि आफ्नै ह’जुरबाले नी’च ह’र्क’त ग’रे’का छन् । यी पीडितमध्ये कतिपय मा’नसि’क स’मस्यामा जकडिएर बसेका छन् भने केही एनजीओ–आइएनजीओको संरक्षणमा पुगेका छन् ।
तर, त्यो पि’डाबाट पी’डित चे’लीहरुको संरक्षण र पुनस्र्थापनाका लागि सरकारसँग कुनै प्रभावकारी कार्यक्रम छैन । यहाँ हामी पाँचवटा दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दैछौं, जसले एक ज’ना बा’बु कतिसम्म प’शु ब’न्न स’क्छ’ भन्ने दर्शाउँछ :
बागलुङको गल्कोट नगरपालिका–८ काँडेबासकी माया सुनारको बिहे भएको आठ वर्ष भयो । किरण सुनारसँग बिहे गरेकी मायाले केही समयपछि छोरी जन्माइन् ।
तर, छोरी जन्माएपछि उनले पतिप्रेम कहिल्यै पाइनन् । दिनहुँ प’तिको कु’टा’इ स’हँदै मा’याले छोरीलाई सात वर्षकी बनाइन्, कक्षा तीनसम्म पढाइन् । एकदिन छोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाएर माया माइत आएकी थिइन् । तर, उनै बाबुले त्य’स रा’त छो’रीमा’थि रा’क्ष’सी ह’म’ला ग’रे ।
भोलिपल्ट वि’क्षि’प्त अ’वस्थामा छोरी स्कुल पुगिन् । उनले राम्रोसँग पढ्न नसकेपछि शिक्षकहरुले सोधे । उनले रुँदै भनिन्, ‘र’क्सी’ खा’एर आ’एप’छि बा’ले म’लाई रा’तभर न’राम्रो का’म ग’र्नुभ’यो । म कत्ति रो’एँ, अ’हँ छो’ड्दै छो’ड्नुभएन ।’ वालिकालाई तत्कालै अस्पताल पुर्‍याइयो ।
भाग्न खोजिरहेका किरणलाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्‍यो । उनी अहिले बाग्लुङ का’रागारको छिँ’डी’मा छन् । मायाले रुँदै भनिन्, ‘मलाई त सात व’र्षदेखि ‘राक्ष’सी व्य’वहा’र दे’खाएको थियो । छो’रीलाई पनि त्यस्तो ग’र्‍यो पा’पीले । छो’री अहिले टोलाइमात्र रहन्छे । थप उपचारका लागि पैसा छैन । आमाछोरीकै जि’न्दगी ब’र्वाद पा’रिदियो दु’ष्टले ।’
ललितपुरस्थित बाँडेगाउँकी १३ वर्षीया किशोरीलाई गाउँलेले सोध्न थाले, ‘तिम्रो पेट किन ठूलो भएको ?’ छिमेकीले सँधै यस्तो सोध्न थालेपछि किशोरीले घरमा गएर त्यही कुरा बाबुलाई सुनाइन् । बाबुले छोरीलाई अस्पताल पुर्‍याए । त्यति नै बेला फोनमा आमासँग कुरा गरेको किशोरीले सुनिन्, ‘छो’रीको पेटमा घा’उ आ’एर अ’प्रेश’न ग’र्न ल्याएको ।’
किशोरीकी आमा वैदेशिक रोजगारीका सिलिसिलामा मलेसियामा पुगेकी थिइन् । आफ्ना दुई छोरीलाई बाबुको जिम्मा लगाएर तिनै सन्तानको उज्वल भविष्यका लागि मलेसियाको खाडीमा पसिनासँग पैसा साट्दै थिइन् आमा । छोरीको विषयमा गाइँगुइँ सुनेपछि आमा मलेसियाबाट घर फर्किइन् तर, उनी घरमा आइपुग्दा छोरीहरु र श्रीमान त्यहाँ थिएनन् ।
श्रीमान र छोरीहरुको कुनै पत्तो नलागेपछि चापागाउँ प्रहरी चौकीमा पुगिन् । त्यतिबेला पो उनी छाँगाबाट खसेझैं भइन् । उनलाई भनियो कि छो’रीको ग’र्भ’पत’न ग’राउ’नका ला’गि श्रीमान हस्पिटल पुगेका रहेछन् । अझ, छो’रीको त्यो ग’र्भ’ आफ्नै ३३ वर्षीय बाबुको भएको सुन्दा उनलाई क’हा’ली ला’ग्यो ।
बाबुले विगत तीन–चार महिनादेखि छो’रीलाई झु’क्याए’र ‘यौ’न’ ‘शो’ष’ण’ ‘ग’र्दै’ थियो । प्रहरीले मुद्दा दायर भएको तीन दिनमै पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो ।
काभ्रे जिल्ला अदालतले आ’फ्नै ‘छो’रीमा’थि ‘दु’ष्क’र्म’ गर्ने ‘बा’बुलाई १८ वर्षको जे’ल सजा’यँ सु’नायो । छो’रीमाथि ‘पा’प’ ‘क’र्म’ ग’रेका उनी अहिले जे’लमा स’जायँ का’टिरहे’का छन् । पू’जामाथि बा’बुले मा’त्र होइन, ह’जु’र’बा’ले स’मेत दु’ष्क’र्म ग’रेका थि’ए ।
विश्वास नै गर्न गाह्रो पर्ने एउटा खबर आयो । खबर थियो दाङ, प’न्धाराका ‘यौ’न’पि’पा’सु’ बा’बुले १’३ ‘वर्षी’या’ छो’रीलाई ‘ब’न्दु’क’ दे’खा’ए’र ‘दु’ष्क’र्म ‘ग’रे’को । उनी ‘रा’ती ‘म’दि’रा’ले ‘मा’ते’र’ ‘आ’उँथे र ‘ब’न्दु’क’ ‘दे’खाए’र ‘त’र्सा’उँ’दै ‘छो’रीलाई ‘शो’ष’ण’ ग”र्थे’ । आमा विदेशमा भएकीले छोरीले कसैलाई पनि सुनाउन सकेकी थिइनन् । तर, पाप धुरीबाट कराउँछ भनेझैं आखिर ती बाबु जेलमा पुगिछाडे ।
पाँचथर, च्याङथापुमा ४७ वर्षका बाबुले १७ वर्षकी आफ्नै छो’रीलाई ‘धा’रि’लो’ ‘ह’ति’या’र’ ‘प्र’यो’ग गरेपछि उनी मनभरि आँ’ट भरेर प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् । घरमा बाबु–छोरी मात्र थिए र ती बा’बुले नि’यमि’त ‘यौ’न ‘शो’ष’ण’ ‘गर्थे । एक दिन ‘मा’पसे ग’री ‘यौ’न’ ‘शो’ष’ण’ ‘मा’त्र ग’रेन’न्, ‘धा’रिलो’ ‘हति’या’र’ नै’ ‘प्र’हा’र ग’रे । त्यसपछि छोरी प्रहरीको शरणमा पुगेकी थिइन् ।
यस्ता छन् तथ्यांक
नेपाल प्रहरी केन्द्रीय कार्यालयको तथ्याङ्कअुनसार पछिल्लो पाँच वर्षमा १६९ जना बाबु र ३५ हजुरबाले ‘य’स्तो ‘ह’र्क’त ग’रेका छन् । देशको राजधानी काठमाडौंमै सबैभन्दा बढी छो’रीहरु ‘पी’डित’ ब’नेको तत्थ्यांकले देखाएको छ ।
पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा काठमाडौंमा १७ जना ‘छो’री पी’डि’त ब’नेका छन् । ललितपुरमा ६ र भक्तपुरमा १ छो’री ‘पी’डित’ ब’नेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालयमा तथ्यांक छ ।
पछिल्लो वर्षमा मात्रै २५ छोरीहरुले य’स्तो पी’डा भोगे’का छन् । पछिल्लो चार वर्षको तथ्यांकले ५३ जिल्लामा यसता घ’टना भएको देखाउँछ ।
अहिलेको कानूनले १० वर्षभन्दा कम उमेरका ‘बा’लिका’लाई ‘ज’वरज’स्ती’ ‘क’रणी’ ‘ग’रेको अवस्थामा १६ देखि २० वर्षसम्म कै’द स’जायँ तोकेको छ । त्यस्तै, १० वर्षभन्दा बढी र १४ वर्षभन्दा कम उमेरको भएमा १४ देखि १६ वर्ष, १४ वर्षभन्दा बढी र १६ भन्दा कम उमेरमा १२ देखि १४ बर्ष र १६ देखि १८ वर्षको भएमा १० देखि १२ वर्षसम्म कै’द स’जायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
१८ वा सोभन्दा बढी उमेरका म’हिलालाई ग’रेमा ७ देखि १० वर्षसम्म कै’द स’जायँ तोकिएको छ । कसैले हा’ड’ना’ता’की महि’लालाई ज’बर’जस्ती’ ‘क’रणी’ ग’रेमा निजलाई ‘हाड’ना’ताको’ ‘कर’णी’मा हुने सजा’यँ थप हुन्छ । सौतेनी आमा–छोरा, बाबु–छोरी, सहोदार दिदी–भाइ एउटै हाँगाका ससुरा–बुहारी, देवर–भाउजू लगायत ‘हा’डना’ता ‘क’रणी’ भ’एको अवस्थामा ४ देखि १० वर्षसम्मको कै’द र ४० हजारदेखि १ लाखसम्म ज’रिवार थपिनेछ । त्यस्तै, वै’वाहिक ‘ब’लात्का’र’मा ५ वर्षसम्म कै’द स’जायँको व्यवस्था गरिएको छ ।
पुनःस्थापना र अभिभावकत्वको खाँचो
‘ब’ला’त्कार’बाट ‘शि’का’र भ’एका’ म’हि’लाहरुका लागि कानूनी उपचार त छ, तर उनीहरुलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन त्यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन । उनीहरुलाई लामो समय राज्यबाट संरक्षण र अभिभावकत्वको आवश्यकता पर्छ । तर, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका एक अधिकारी यस्ता पी’डि’तलाई केही समयका लागि पुनस्र्थापनमा राख्नेबाहेक अरु कुनै संरक्षणको व्यवस्था नभएको बताउँछन् ।
‘घ’रे’लु ‘हिं’सा’मा उ’जुरी’का ”आधारमा हामीले संघ–संस्थासँग मिलेर केही समय पुनस्र्थापना केन्द्रमा राख्न सक्छौँ । त्यसबाहेक अरु त्यस्तो कुनै सहायता छैन,’उनले भने, ‘तर, अहिले संघीयतामा गैसकेपछि यो खालको व्यवस्था गर्नका लागि गृहकार्य भएको छ । त्यो अझै पूरा भएको छैन ।